Nei tichifanira kufamba nechitima? Dzidzisai pakufamba ari kutoita, hunoshanda uye inopa pasocial chinoitwa kuti dzimwe chokufambisa nzira havangagoni kunowirirana. zvisinei, vaifamba aine urema zvinotyisa kune vamwe. Izvi hazvireve kuti haugone kunakidzwa nekunakidzwa, Zvisinei. Nyaya iyi inopa dzimwe nzvimbo dzinokosha kuti unofanira funga kana kuronga yenyu chitima rwendo saka vaifamba aine vakaremara Europe iri shoma anoshungurudza.
Ndeipi Chitima Yekutora paSave-A-Chitima kana uri kufamba nehurema?
Special Rokufambira akaremara basa ingasiyana munzvimbo imwe, zvinoenderana nemaitiro akati wandei; motokari uri kunyanya chitima, zvivako panguva dzakasiyana-siyana nhepfenyuro munzira yako, uye kunyangwe mutemo wako wekutakura pakuwanika.
Wongorora tikiti rako uye mafambiro nokungwarira kana uchinge wagamuchira. Onai kuti imi muri achinyatsoita policies ayo uye urongwa kuitira kuti urege kushamiswa kwenyu stopovers siyana (kunyanya kana parwendo mhiri kwemakungwa).
Rambira zvikuru kuwana zvikamu veguta. Ichi chimwe chezvinhu zvakaoma zvikamu zvekuronga yako chitima rwendo uchifamba nehurema. Unogona kuwana hotera huru pindika, asi chii chauchawana paunofamba / vagokungurusa panze? Pane zvikomo uye masitepisi kwose kwose? Munoda kumonera pamusoro cobblestones? Pane mumaresitorendi pindika pedyo? Zvinokosha kuti tsvakurudza hotera nharaunda. Unogona kushandisa Google Maps Street View kuti ndiwane pasi panyika, ipapo paemail hotera nemibvunzo yenyu.
Unogona kuodha matikiti ako ezvitima pakati pe Uchitsanya nezvitima mu Europe pamusoro Save-A-Rovedzai kusvika ose kuenda wechi pamusoro mu 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri chitima tikiti prices uye kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo?, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)